बैंकमा भएको नेकपाको पैसा कसको ? - Nayabulanda.com
बैंकमा भएको नेकपाको पैसा कसको ?
नयाँ बुलन्द १६ पुष २०७७, बिहीबार १८:३२ 94 पटक हेरिएको
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटेपछि बैंकहरूमा रहेको पैसा कसको हुने भन्ने विवाद समेत देखिएको छ । बैंक खाता रोक्का गर्न माग गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले बैंकहरूमा पत्राचार गरेको छ ।
पार्टीभित्र विवाद रहेको र सम्पत्तिमा कसको हक लाग्ने भन्ने यकिन नभएको तर्क गर्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले नेकपाको खातामा रहेका बैंकहरूमा इमेलमार्फत पत्र पठाएका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पुस १२ गतेको मितिमा बैंकहरूलाई पत्र पठाएको छ । नेकपाका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंकहरूलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीको नाममा भएका सम्पत्ति कसको भन्ने टुंगो नलागुञ्जेलसम्म रोक्का राख्ने निर्णय अघिल्लो हप्ता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको थियो । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयपछि नेकपा पार्टी कार्यालयले पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए ।